Piwik Ihe Google Analytics: Uru nke Nchịkọta On-Premise | Martech Zone
Anyị nwere onye ahịa nke anyị tụrụ aro Piwik. Ha na-abanye n'ime ụfọdụ nsogbu akụkọ na-akpata ma Google Analytics yana ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ nchịkọta n'ihi ụda ndị ọbịa ha na-abanye na saịtị ha. Nnukwu saịtị anaghị achọpụta na ha nwere nsogbu nkwụsị na njedebe data ya na Google Analytics.
The inweta nwere a nnọọ nkà web otu otú ewere nchịkọta Ọ dị mfe n'ime. Tinyere mgbanwe iji hazie dabere na ikpo okwu ha, a ga-enyekwa otu ndị na-ere ahịa ihe ziri ezi nchịkọta, na ezigbo oge, na-enweghị mgbakọ na mwepụ njehie dabere na nlele nke ndị ọbịa.
Ọ bụrụ na Google Analytics na-egbochi gị, Piwik nwere ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ Obodo Piwik mbipụta bụ ihe mepere emepe nchịkọta ngwá ọrụ nke na-abịa na mmelite oge niile na ọhụụ ọhụrụ maka n'efu. Piwik PRO Na-ogige na-agụnye a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ adịchaghị atụmatụ na ọrụ. Piwik PRO na-enyekwa a ngwọta igwe ojii (ebe ị ka nwere data ahụ) ma ọ bụrụ na ịnọghị ịkwado ya n'ime. Piwik nwere ihe zuru ezu tụnyere nke ọ bụla ngwọta na saịtị ha.
Budata Compar zuru ezu
Piwik ebipụtakwala infographic na uru niile ha na-enye karịa Google Analytics. N'eziokwu, nke a bụ akwụkwọ ozi na-adịghị mma. Google Analytics na-enye Nchịkọta Google 360 maka ndị ahịa ahụ. Okwesighi igha na ekwuputaghi na Google nwere uru nke webmaster na ntinye Adwords nke ndi ozo di iche n’enyeghi.
Piwik PRO Atụmatụ
Piwik gụnyere akụkọ ndekọ ọnụ ọgụgụ niile: isiokwu dị elu na engines ọchụchọ, weebụsaịtị, URL kacha elu, aha peeji, mba ndị ọrụ, ndị na-eweta ọrụ, sistemụ arụmọrụ, òkè ahịa nchọgharị, mkpebi ihuenyo, desktọọpụ VS mobile, njikọ aka (oge na saịtị, ibe kwa nleta) , nleta ugboro ugboro), mkpọsa kachasị elu, mgbanwe dị iche iche, ntinye ntinye / ọpụpụ peeji nke, faịlụ ebudatara, na ọtụtụ ndị ọzọ, nkewapụtara n'ime isi anọ nchịkọta akụkọ edemede - Ndị ọbịa, Omume, Ndị Ntugharị, Ebumnuche / e-Azụmaahịa (akụkọ 30 +). Lee Piwik zuru ndepụta nke atụmatụ.
Real-oge data mmelite - Lelee ezigbo oge nleta nke nleta na weebụsaịtị gị. Nweta nkọwa zuru ezu banyere ndị ọbịa gị, ibe ha gara na ihe mgbaru ọsọ ha kpatara.
Dashboard omenala - Mepụta ọhụụ ndị ọhụrụ na nhazi wijetị dabara na mkpa gị.
Dashboard Weebụsaịtị niile - ụzọ kachasị mma iji nweta nyocha nke ihe na-eme na weebụsaịtị gị niile n'otu oge.
Ozo Evolution - Ugbu data data gara aga maka usoro ọ bụla na akụkọ ọ bụla.
Mgbaru ọsọ ntụgharị nsuso - Sochie Mgbaru Ọsọ ma chọpụta ma ị na-ezute ebumnuche azụmaahịa gị ugbu a.
Ndepụta ọdịnaya - Tụọ mmetụta na clicks na CTR maka ọkọlọtọ onyonyo, ọkọlọtọ ederede na mmewere ọ bụla na ibe gị.
Omenala Dimensions - Kenye ndị ọbịa ma ọ bụ omume gị ọ bụla data omenala (dị ka ibe, ihe omume,…) wee jiri anya nke uche hụ akụkọ banyere ọtụtụ nleta, mgbanwe, nyocha peeji, wdg. Enwere Custom Dimension ọ bụla.
Pages gafere - Lelee ihe ndị ọbịa mere tupu mgbe ịlelechara peeji a.
Akụkọ ọsọ ọsọ na saịtị na ibe - Na-edekọ etu websaịtị gị na-esi ewepụta ọdịnaya gị nye ndị ọbịa.
Sochie mmekọrịta onye ọrụ dị iche iche - Nchọgharị akpaaka nke nbudata faịlụ, pịa na njikọ weebụsaịtị na mpụga, na nsuso nhọrọ nke ibe 404.
Nchịkọta mkpọsa nchịkọta - Na-achọpụta rụọ ọrụ nchịkọta Google Analytics na akpaghị aka na URL gị.
Enweghị oke data - nwere ike ịdebe data gị niile, na-enweghị oke nchekwa, ruo mgbe ebighị ebi!
Mmekọrịta - nwere ihe karịrị 40 CMS, ntọala weebụ ma ọ bụ ụlọ ahịa Ecommerce
Nchịkọta Ngwa Mobile ya na Piwik iOS SDK, gam akporo SDK na titanium modul.
Tags: ọzọ na nchịkọta googlenchịkọta apidata nchịkọtammachi nchịkọtanchịkọta nchịkọtaon-premise nchịkọtaPiwikigwe ojii piwikobodo piwikndu propiwik vesos gapiwik na google analyticsegwu vs gapiwik na google nchịkọtaezigbo oge nchịkọtanyocha nyocha ọcha